ကမ္ဘာ့မြောက်ဖျားအငူ North Cape သုို့ခရီးသွားခြင်း (၂) ~ Htet Aung Kyaw
ကမ္ဘာ့မြောက်ဖျားအငူ North Cape သုို့ခရီးသွားခြင်း (၂)
3:19 AM Htet Aung Kyaw No comments
Nord Norge နှင့် Arctic Circle 66.33 N များဆီသုို့
မိုးဖွဲဖွဲအောက်က ပလစတစ်တဲထဲ ကွေးလုိုက်တာ မနက် ၆ နာရီအထိ တရေးပဲရပါတယ်။ တော်သေးတယ် ၃ ယောက်စလုံး ဘယ်သူမှ အကျယ်ကြီးမဟောက်တတ်လုို့၊ ဒါမှမဟုတ် ဟောက်တဲ့သူက သူတို့ထက်အရင်စောပြီး အိပ်ပျော်သွားတာကြောင့် ဘာအသံမှမကြားရတာလဲဖြစ်နုိုင်ပါတယ်။ ပြသာနာက အိပ်ယာနုိုးနုိုးခြင်း အိမ်သာသွားလေ့ရှိတဲ့အကျင့်။ ကုိုယ့်အ်ိမ်မှာကုိုယ်နေတဲ့အချိန် ပြသာနာမရှိပေမယ့် အခုလုို အများသုံးအိမ်သာဆီပြေးရမယ်၊ တဲ ထုိုးထားတဲ့နေရာနဲ့ အိမ်သာက ၂ မီနစ်လောက် လမ်းလျောက်ရမယ်။ အနောက်တုိုင်းဆန်ဆန် အိပ်ထားတာဆုိုတော့ အပြင်မထွက်ခင် အ၀တ်ဝတ်-ဖိနပ်စီးချိန်က ကြာအူးမယ်။
ကံ ကဆုိုးချင်တော့ အိမ်သာရောက်ချိန်မှာ ညက ဘယ်သူတွေများပြီ အားပေးသွားလဲမသိပါ။ အိမ်သာ ၂ လုံးမှာ တလုံးက သုံးလုို့မရတော့ဘူး။ အံဖတ်တွေ၊ တစ်ရှုးစတွေ၊ မစင်တွေနဲ့ပိတ်နေလုို့ မနေ့ကပြောခဲ့တဲ့ ကောင်တာမှာထိုင်တဲ့ ဆယ်ကျော်သက်ကောင်မလေးနဲ့ သန့်ှရှင်းရေးလာလုပ်တဲ့ ကောင်မလေးတယောက်က စွယ်တာ အင်ကျီကုို နခေါင်းအပေါ်အထိဆွဲတင်ပြီး အိမ်သာရှင်းဖုို့ကြိုးစားနေပါတယ်။ ကုိုယ်ကလည်း ဒီမှာ မအောင့်နုိုင်တော့ဘူး။ သူ့တုို့ကုို ၀င်မကူနုိုင်ပဲ ဘေးခန်းဝင်လုို့ရလားလုို့မေးပြီး ချီးစော်နံနေတဲ့ကြားကပဲ မလွယ်ထားနုိုင်တဲ့ကိစ္စကုို မျက်နှာပူပူနဲ့ အမြန်ရှင်းခဲ့ရပေါ့။
မနက်စောစော အိမ်သာအကြောင်းပြောနေတယ်ဆုိုပြီး အပြစ်တင်မစောပါနဲ့။ မြန်မာပြည်က ကလေးတွေဆုို ဒီလုိုလုပ်ပါ့မလား၊ ဒီလုိုတာဝန်ယူပါ့မလားဆိုတာ စဉ်းစားမိလုို့ပါ။ သူတုို့မှာ မလုပ်ပဲနေလည်း နေပုိုင်ခွင့်ရှိတာပဲလေ။ ခုနက နွေရာသီအလုပ်ဆင်းတဲ့ ကျောင်းသူလေးတွေအကြောင်း နည်းနည်းထပ်ပြောရမယ်ဆိုရင် ဒီမှာက ဇွန်-ဇူလုိုင်-သြဂုတ် နွေရာသီ ၃ လအတွင်း အလုပ်သမားအတော်များများက ဟောလီးဒေးယူပြီး ခရီး ထွက်ကြပါတယ်။ ဒီတော့ အဲဒီနေရာတွေမှာ (ကျောင်းပိတ်ချိန်လည်းဖြစ်တော့) ကျောင်းသား-ကျောင်းသူတွေက အချိန်ပိုင်း အလုပ် ၀င်လုပ်ကြပါတယ်။ နွေရာသီ ယာယီအလုပ်ဆုိုတော့ အခွန်ပေးစရာမလုိုဘူး။ တလ- ၄၅ ရက်လေက်လုပ်ထားတဲ့ လုပ်အားခက ကျောင်း သားတွေအတွက် အများကြီးအထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်။
ငွေရတာအပြင် စိတ်ဓာတ်အရလည်း မိဘကုိုအားမကုိုးဘူး၊ ကုိုယ်ဘာသာ ၀င်ငွေရှာနုိုင်တယ်ပေါ့...။ (ကျောင်းလခနဲ့ အသုံးစရိတ် အတွက်လည်း အစိုးရ ကချေးပေးတဲ့ ကျောင်းချေးငွေရှိပါတယ်။ အလုပ်ရမှ ပြန်ဆပ်နုိုင်တဲ့အတွက် မိဘကုို သိပ်အားကိုးစရာမလုိုပါ)။ အနောက်တုိုင်းမှာ ဒီလုိုအစဉ်အလာ ရှိပါတယ်။ မြန်မာနုိုင်ငံမှာတော့ လူငယ်အတော်များများက မိဘတွေဆီကနေပဲ လက်ဖြန့်တောင်းနေကြဆဲဖြစ်ပုံရပါတယ်။ -အလုပ်ဟူသမျှ ဂုဏ်ရှိစွ- ဆုိုတာ စာရွက်ပေါ်မှာပဲရှိပြီး လက်တွေ့မှာတော့ ဒီလုို အောက်ခြေသိမ်းအလုပ်ကုို ကျောင်းသား လူငယ်တွေ လုပ်နေတာမျိုး မတွေ့မိသေးပါဘူး။
အဲ…မနက် စောစော အိမ်သာအရှုပ်တော်ပုံအပြီးမှာတော့ ကော်ဖီသောက်-မနက်စာ စားပေါ့။ အဲ- မနက်စာက ဘာမှရှိတာမဟုတ်ဘူး။ နီးနီးနားနား လဖက်ရည်ဆုိုင်တွေ၊ မုန့်ဟင်းခါးဆုိုင်တွေလည်း မရှိဘူးဆုိုတော့ ခုနကကောင်တာမှာ နော်ဝေ ခေါက်ဆွဲဗူးကုိုမှာပြီး ရေနွေးနဲ့ပြုတ်သောက်ပေါ့။ နော်ဝေ ခေါက်ဆွဲက ချိစ်ပါတဲ့အတွက် ထုိုင်းကလာတဲ့ မားမားခေါက်ဆွဲထက် ပုိုအဟာရရှိတယ်ဆုိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မြန်မာအများစုကတော့ အာဟာရထက် လျှာအရသာနောက်ပဲလုိုက်ပြီး စားကြတယ်လို့ ဝေဖန်သူတွေက ဆုိုပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ကုိုမင်းမင်းကတော့ မရဘူး။ ထမင်းစားရမှ ကားမောင်းနုိုင်မှာတဲ့။ မနေ့ညက ကျန်နေတဲ့ ထမင်းကုိုနွေးပြီး အမြန်စား။ ညက အိပ်ထားတဲ့ တဲကုို အမြန်သိမ်း၊ တဲ သိမ်းတာမြန်ပေမယ့် အ်ိပ်ယာလိပ် Sovepose ကုို ပုံစံဝင်အောင်ခေါက်ပြီး အိတ်ထဲပြန်ထည့်ရတာ အတော် လက်ဝင်ပါတယ်။ အားလုံးပြီးတော့ မနက် ၉ နာရီ။ ဒီနေ့အတွက် ကီလုို ၄၆၀ ၀န်းကျင်ရှိ နော်ဗစ် Narvik မြို့ဆီ အရောက်မောင်း ရမယ်တဲ့။ ကုိုမင်းမင်းနဲ့ ကုိုကျော်သူကင်းတုို့က GPS ထောက်ပြီးပြောနေပါတယ်။ ကုိုယ်က နောက်ခန်းက ထိုင်လုိုက်တဲ့ ခရီးသည်လုိုဖြစ် နေတယ်ဆုိုတော့ အင်း- အင်း ပေါ့...။
လမ်းတလျောက်မှာ ဘယ်လုိုစိတ်ဝင်စားစရာနေရာရှိလဲ.ဆုိုတော့..၊ ဘာမှကြိုကြည့်ထားတာ မရှိဘူး။ စိတ်ဝင်စားမယ်ထင်ရတဲ့နေရာမှာ ကားထုိုး ရပ်ပြီးဝင်ကြည့်ကြတာပေါ့တဲ့။ အင်း...ဒီလူတွေအကြောင်း နည်းနည်းမိတ်ဆက်ပေးရအူးမယ်။ တကယ်ဆုို တခါမှ အတူခရီးမသွားဖူးတဲ့ လူ ၃ ဦးပေါင်းပြီး အတူသွား-အတူစား-အတူအိပ် ၁၀ ရက်လောက်ခရီးအတူသွားဖုို့ဆုိုတာ သိပ်လွယ်တာမဟုတ်။ ကုိုမင်းမင်းက ကရင်ပြည်နယ် ဖက်က။ အရင်က နှစ်ခါလောက်ပဲတွေ့ဖူးပြီး ပြီးခဲ့တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပန်းခြံခရီးစဉ်မှာမှ အတူသွားဖူးတာ။
တခါ ကုိုကျော်သူကင်းကုိုလည်း တနယ်တည်းသား ပုလောမြို့က လွှတ်တော်အမတ်ရဲ့သားမှန်း သိပေမယ့် အော်စလုိုမှာ နှစ်ခါလားမသိဘူး၊ ဒီလောက်ပဲတွေ့ဖူးပါတယ်။ အဲလုို အချင်းချင်း သိပ်မသိကြသေးတဲ့သူ ၃ ဦးပေါင်းပြီး ခရီးထွက်လာတော့ အခုမှ တဦးအကြောင်း တဦးလေ့လာနေရတာ...။
ထူးတာကတော့ သူတို့ နှစ်ယောက်စလုံးက ဆံပင်ရှည်ကုိုစည်းထားတဲ့ လူငယ်စတုိုင်ဖမ်းထားသူတွေပေါ့။ အသက်ကွာတာက ပြသာနာမရှိဘူး။ သွားချင်တဲ့နေရာ၊ နားချင်တဲ့နေရာတူနေရင် ပြီးတာပဲမဟုတ်လား။ သူတို့ကတော့ ပြောပါတယ်၊ စိတ်တူကုိုယ်တူမဟုတ်ရင် ခရီးသွားဖုို့မလွယ်ဘူး။ မနက် ကားပေါ်တက်တာနဲ့ သွားချင်တဲ့နေရာကို တယောက်မျုိုးပြော၊ အထူးသဖြင့် အခုလုို ၁၀ ရက်လောက်သွားရမယ့် မြောက်ပိုင်းခရီးဆုိုရင် ပုိုဆုိုးပေါ့။ ကြားဖူးသလောက်ဆုိုရင် အဲဒီမြောက်ပုိုင်းကုိုသွားရင်းနဲ့ ဝေးလွန်းလို့ဆုိုပြီး Nordkapp အထိ မသွား တော့ပဲ လမ်းတ၀က်ရှိ ကျွန်းတွေမှာလည်း နေမ၀င်တဲ့ညကုို ကြည့်နုိုင်သားပဲဆုိုပြီး ၃ ရက်မောင်းခရီးလောက်ကနေ လှည့်ပြန်လာကြသူ တွေရှိတယ်ဆုိုပါတယ်။
ကုိုယ်တွေထဲမှာတော့ လှည့်ပြန်ချင်တဲ့သူ မရှိလောက်ပါဘူး။ ကျနော်နဲ့ ကုိုကျော်သူကင်းက ဒီဖက်ကုို ကားနဲ့တခါမှ မရောက်ဖူးသေးပေမယ့် ကိုမင်းမင်းက ဒီခရီးကုို လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်က ကားမောင်းပြီး တခေါက်သွားဖူးထားတယ်ဆုိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆယ်နှစ်ဆုိုတော့ လမ်းကအများကြီးပြောင်းသွားပြီ။ သူလည်း GPS နဲ့ ဂုိုဂယ်ကုိုပဲ အားကိုးနေရပုံရပါတယ်။ သူက ကျနော်တို့ထက် အသက် ၁၀ နှစ်ကျော်ငယ်တဲ့အပြင် နော်ဝေစကားကလည်း အတော်ကောင်းပါတယ်။ ဒီမှာက နော်ဝေလုိုပြောမှ ပုိုအဆင်ပြေပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်လုိုပြောနေရင် တော်ရုံနဲ့လုိုရင်းမရောက်ဘူး။ ပြီးတော့ သူက ထုိုင်းလုိုလည်း အတော် -ကိန်- ပါတယ်။ ကရင်လုိုလည်း ရတယ်။ သွက်သွက်လက်လက်လည်း ရှိတယ်ဆုိုတော့- ခရီးစဉ်တလျောက် သူ့ကုိုပဲ အဓိက ရှေ့တန်းတင်ထားရတယ်ပေါ့။
ဒီလူတွေက လမ်းတလျောက်က စိတ်ဝင်စားဘွယ်လေ့လာစရာနေရာကို ကြိုကြည့်မထားဘူးလုို့သာဆုိုတယ်။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် နည်းနည်းလှတာမြင်တာနဲ့ တယ်လီဖုန်းထုတ်- တခါတည်း ဖေ့စ်ဘုတ်ကနေ လုိုက်ဖ် တင်တော့တာပါပဲ။ အဲလုိုလုပ်နေတုန်း Wow ဆိုပြီး Nord Norge ဆုိုတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်အကြီးကြီးတခု လမ်းမကြီးကုိုဖြတ်ပြီး တင်ထားတာတွေ့လုိုက်ရပါတယ်။ ဘေးနား ကြည့်လုိုက်တော့ ကားရပ်တဲ့နေရာနဲ့ အိမ်သာ၊ ပြီးတော့ အမှတ်တရပစ္စည်းရောင်းတဲ့ဆုိုင်။ ဒါဆုို ကားရပ်ပြီး လေ့လာရေးဝင်သင့်တာပေါ့...။
မြောက်ပုိုင်းခရီးထွက်လာတာ ၃ ရက်ရှိနေပြီ၊ အခုမှ နော်ဝေမြောက်ပုိုင်း ဧရိယာကုို စတင်ဝင်ရောက်တာတဲ့။ နော်ဝေကလည်း မြန်မာပြည် မြေပုံလုိုပါပဲ။ အရှေ့နဲ့အနောက်ကိုဖြတ်သွားရင် နီးနီးလေး၊ အခုက တောင်နဲ့မြောက်ကုိုဖြတ်သွားနေတာဆုိုတော့ ဧရာဝတီမြစ်ကုို အလျားလုိုက် ကူးသလုိုကြီးဖြစ်နေလေမလား...။ ရန်ကုန်ကနေ ထွက်လာတာ အခုမှ မန္တလေးကျော်ရုံလေး၊ သွားရမယ့်ခရီးက ပူတာအုိုအထိ ဆုိုပါတော့...။
ကျန်တာ နောက်မှစဉ်းစား၊ လောလောဆယ် အိမ်သာတက်၊ ကော်ဖီသောက်၊ အမှတ်တရပစ္စည်းဆုိုင်ထဲ ဟုိုငေး-ဒီငေး လုပ်ပြီး ခရီးဆက်ရဦးမယ်။ မြောက်ပုိုင်းရောက်လေ- ခုနကပြောတဲ့ ဟုိုတယ်ကားတွေက ပုိုများလာလေ။ ဒီကလူတွေအားလုံး အလုပ်မလုပ်ပဲ ဟောလီးဒေးချည်း ထွက်နေကြလား မသိပါဘူး။ သတင်းတွေထဲဖတ်မိသလောက်ဆုိုရင်တော့ ဒီနှစ်ကွန်ဗစ်ဖြစ်နေလုို့ နော်ဝေအတော်များများ အပြင်ကုို (ပြည်ပခရီး) ခရီးမသွားပဲ ပြည်တွင်းမှာပဲ၊ အထူးသဖြင့် အခုကျနော်တုို့သွားနေတဲ့ မြောက်ပုိုင်းအရပ်ဆီ သောင်းနဲ့ချီ သွားနေကြတယ်လုို့ဆုိုပါတယ်။ ကျနော်တုို့လုိုပဲ အိမ်စီးကားတွေနဲ့ ၃-၄ ဦးသွားနေကြသလုို ဟုိုတယ်ကားတွေနဲ့သွားနေသူတွေကလည်း မနည်းလှပါဘူး။
အဲကားတွေက ဈေးကြီးတယ်။ ခရိုနာ ၇ သိန်း (အမေရိကန်ဒေါ်လာ တသိန်းဝန်းကျင်) နီးပါးရှိတယ်။ ငှားမယ်ဆုိုရင်တော့ တရက် နှစ်ထောင်ထက် မပုိုဘူးတဲ့... ကားအကြောင်းကျွမ်းကျင်တဲ့ ဆ၇ာသမား နှစ်ဦးကပြောပါတယ်။ အာ့ဆုို မဆုိုးဘူး... ဟုိုတယ်ခကလည်း တရက် ၂၀၀၀-လောက်ကျတယ်ဆုိုတော့ နောက်တခါသွားရင် ဟုိုတယ်ကားတွေကုိုပဲ ငှားစီးရအောင်လုို့.. ပြောဖြစ်ကြပါသေးတယ်။ အခု တော့ မငှားနုိုင်သေး၊ ကုိုယ့်ကားကုိုယ်မောင်း... Narvik ရောက်အောင် သွားရအူးမယ်။
လာပြန်ပြီ- နောက်တနေရာ။ တနာရီကျော်ထပ်မောင်းပြီးချိန် သစ်ပင်တွေမရှိတဲ့တောင်ကုန်းပေါ်မှာ ရေခဲတွေကျန်နေပြီး လှလှပပ ဖြစ်နေတဲ့အတွက် ကားခနရပ်- ဓာတ်ပုံရုိုက်- လုိုက်ဖ်လွှင့်ပေါ့။ ကားရပ်မယ့်နေရာက ကျဉ်းကျဉ်းလေးဆုိုတော့ ဖြတ်သွားတဲ့ ကားတွေက ကုိုယ်တွေကုို ကွက်ကြည့်ကွက်ကြည့်လုပ်သွားလေရဲ့။ ကားပေါ်ပြန်တက်ပြီး ၅ မီနစ်မောင်းလုိုက်တာနဲ့ Wow ဆုိုပြီး အာတိတ်စက်ဝုိုင်း ယာဉ်ရပ်နားစခန်း Arctic Circle 66.33 N ဆိုတာကိုတွေ့တော့မှ ဒီလူတွေ အာတိတ်စက်ဝုိုင်းမှာမရပ်ပဲ ဘာလုို့ လမ်းဘေးမှာရပ်နေသလဲဆုိုပြီး ခုနကလူတွေ ကွက်ကြည့်၊ ကွက်ကြည့်လုပ်သွားတာဖြစ်မှာပေါ့။ ပြီးတော့ ၃ ဦးစလုံးက အာရှကလာတဲ့ ခေါင်းမဲတွေ။ အဖြူလည်းမပါ- အမည်းလည်းမပါ၊ အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးလည်းမပါဘူးဆုိုတော့ အများအမြင်မှာ နည်းနည်းထူးနေတဲ့ ခရီးသွားတွေ ဖြစ်နေပုံရပါတယ်။
မြောက်ပုိုင်းခရီးစဉ်အတွင်း တွေ့သမျှနေရာထဲမှာ ဒီနေရာက အစည်ကားဆုံး နေရာတခုပါပဲ။ ကားတွေ ဒါဇင်နဲ့ချီ ရပ်ထားတာတွေ့ရပြီး အဝေးပြေး အကောင်းစား မော်တော်ဆုိုင်ကယ်တွေကုိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။ လိပ်ခုံးပုံ (ဆောင်းတွင်း ခေါင်မုိုးပေါ် ရေခဲတင်နေမှာ စိုးလုို့ထင်) စားသောက်ဆုိုင်နဲ့ပြတုိုက်ထဲမှာလည်း လူတွေက အပြည့်။ တဦးနဲ့တဦး တမီတာ ကွာရဲ့လားတောင် သတိမထားမိတော့ပါဘူး။ ဗိုက်ဆာပြီဆုိုတော့ ဟော့ဒွတ်နဲ့ ကော်ဖီကုို အားပေးရပြန်ပေါ့။ ပြီးတော့မှ စားသောက်ဆုိုင်နောက်က တောင်ကုန်းပေါ်တက်ပြီး ဓာတ်ပုံရုိုက်ရပါတယ်။
ဒီကလူတွေလည်း တောင်ပေါ်မှာ စေတီတည်တာ စိတ်ဝင်စားလား မသိဘူး။ တောင်အမြင့်တွေ (တောင်ကတုံးတွေ) တုိုင်းမှာ ကျောက်တုံးငယ်လေးတွေကုို စေတီပုံစံလုိုမျုိုး တလုံးပေါ်တလုံး ထပ်တင်ထား ကြာတာကုို တောင်အမြင့်တွေတုိုင်းလုိုလုိုမှာတွေ့ရပါတယ်။ ဒီဒေသကုို မြန်မာဘယ်နှစ်ဦးရောက်ဖူးသလဲ... ခုနက စားသောက်ဆုိုင်ထဲရှိ ဧည့်မှတ်တမ်းထဲ ရှာကြည့်တော့ မတွေ့မိဘူး။
ဒီတော့ ကုိုယ်တုို့ ၃ ဦးရဲ့အမည်တွေကိုရေးပြီး မြန်မာနုိုင်ငံကနေ ဒီအထိ ဒါရုိုက်လာပြီး လေ့လာရေးဆင်းတဲ့ သူဌေးတွေလုိုလုို၊ ခရုိုနီတွေလုိုလုိုနဲ့ နေရပ်မှာ ရန်ကုန်-မြန်မာဆုိုပြီး ခပ်တည်တည် ဖြည့်ထားခဲ့ပေါ့။ ဘာပြောပြော မနေ့ကနဲ့စာရင်တော့ ခရီးက အတော်ပေါက်လာပြီ။ နော်ဝေမြောက်ပုိုင်းဆုိုတဲ့ ဆုိုင်းဘုတ်လည်းတွေ့ပြီ၊ အာတိတ်စက်ဝုိုင်း Arctic Circle 66.33 N ဆုိုတာကုိုလည်းတွေ့ပြီဆုိုတော့ ကျနော်တုို့ရဲ့ အဓိကပစ်မှတ် မြောက်ပုိုင်းအငူ Nordkapp 71-N ကုိုရောက်ဖုို့ ၅ ဒီဂရီလောက်ပဲ လုိုတော့တယ်ပေါ့...။
ချောင်းတွေ့ရင် ဇက်နဲ့ကူး၊ တောင်တွေ့ရင် ဂူဖောက်....
၅ ဒီဂရီက စာရွက်ပေါ်မှာ သိပ်မဝေးပေမယ့် မြေပြင်မှာကတော့ နောက်ထပ် ကီလုို ၈၀၀ လောက်သွားရဦးမယ်လုို့ GPS မှာ ပေါ်နေပါတယ်။ ကျနော်တုို့နောက်ထပ်သွားချင်နေတဲ့ ရုရှား-ဖင်လန်နယ်စပ်က ရှိကနက်စ် Kirkenes မြို့ကုိုဆုိုရင် ကီလုို ၁၁၀၀ ကျော်ဆုိုပြီး ပေါ်နေပါတယ်။ အင်း..မဖြစ်ချေဘူး။ မုိုးကလည်းရွာနေဆဲဆုိုတာ့ ဒီညပစ်မှတ် Norvik ကို ရောက်အောင် အမြန်မောင်းမှဖြစ်မယ်။ အမြန်မောင်းပါတယ်ဆုိုမှ တနာရီ တောင်မကြာလုိုက်ဘူး။ Skarberget မြို့မှာ လမ်းဆုံးသွားပြီ။ ကားတွေအားလုံး လှေ (ဇက်) နဲ့ ဟုိုဖက်ကမ်းကို ကူးရမယ်တဲ့။ ဒီက ဇက်တွေက ရန်ကုန်-ဒလ ကူးတဲ့ ဇက်တွေနဲ့တခြားစီ။ မသိရင် သဘောင်္ကြီးပေါ် ကားတွေမောင်းဝင်သွားတဲ့အတုိုင်း။ ရေထဲပြုတ်ကျမလားဆုိုပြီး စိုးရိမ်စိတ် လုံးဝမဖြစ်မိ။ (ရန်ကုန်-ဒလ ကားတင်ပြီးကူးတဲ့ ဇက်တွေကိုလည်း ဒီလုို အဆင့်မြှင့်နုိုင်ရင် ကောင်းမယ်)
ရန်ကုန်-ဒလ ဇက်အကြောင်းစဉ်းစားရင်းနဲ့ ဇက် မှားစီးမိတော့မလုို့...။ တကယ်က E6 လမ်းအတုိုင်းမောင်းလာတဲ့ ကားတွေရော၊ E10 လမ်းအတုိုင်းမောင်းလာတဲ့ကားတွေရော ဒီမှာလာဆုံကြတာ။ ဒါကုိုကြိုမသိတော့ ပထမ တွေ့တဲ့ ဇက်ဆိပ်မှာပဲ ကားကိုထုိုးရပ်လုိုက်တာ ပေါ့။ ဇက်ပေါ်တက်ခါနီး အသေချာမေးကြည့်တော့မှ E6 ဆုိုရင် ဟုိုရှေ့က ဆိပ်ကမ်းကိုသွားပါ။ ဒါက E10-လမ်း၊ Lofoten ကျွန်းတွေဖက် ရောက်မယ်တဲ့။ ကုိုယ်တွေက အဲဒီအချိန်အထိ Lofoten ကျွန်းတွေဆုိုတာ ဘာမှန်းမသိသေး။ Nordkapp မှတပါး အခြားမသိဖြစ်နေဆဲ ပေါ့။ (တကယ်က အဲဒီ Lofoten ဖက်ကုိုလည်း အတော်များများသွားလယ်ကြတယ်လုို့ သိရပါတယ်)။
ဇက်က တနာရီနီးပါး စီးရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပျင်းစရာမရှိပါဘူး- အပေါ်ထပ်တက်ပြီး သဘာဝအလှတွေကိုငေးမလား၊ ဒုတိယ ထပ်က စားသောက်ခန်းထဲဝင်ပြီး အဆာပြောတခုခုခုစားမလား။ နှစ်ခုစလုံးလုပ်မလား- ရတယ်လေ၊ ကို်ယ့်စိတ်ထဲမှာတော့ ရန်ကုန်မှာတုန်းကစီးဖူးတဲ့ ဒလ-ရန်ကုန် ကားတင်တဲ့ဇက်ကုိုပဲ ပြေးမြင် မြင်နေမိပါတယ်။ အဲဒီဇက်မောင်းသူတွေက ခရီးသည်တွေကို အလေးမထားဘူး။ ခရီးသည်ပါတဲ့ကားတွေကုို ကွန်တိန်ကားတွေများထင်နေလားမသိဘူး။ တစီးနဲ့တစီး ပူးကပ်ထားခုိုင်းတာ ကားတံခါးတောင် ဖွင့်မရဘူး။ အတက်- အဆင်းလုပ်ရတဲ့နေရာကလည်း အနိမ့်အမြင့်မညီတော့ အတော်ဒုက္ခများပါတယ်။ စိတ်ထဲမှာ လုိုက်လာမိတာမှားပြီ။ လှိုင်သာဖက် ပြန်ပတ်မောင်းရင်တောင် ဟုတ်ဦးမယ်ပေါ့။ ဒီမှာကတော့ စိတ်ထဲ အဲလုိုမဖြစ်မိ။ တနာရီလောက် ကားမောင်းသူ အနားယူနုိုင်ပြီး သက်တောင့်သက်သာပါပဲ။
ဟုိုဖက်ကမ်းကို ဇက်ဆုိုက်ပြီး တနာရီလောက် ထပ်မောင်းပြီးတဲ့အခါမှာတော့ ဒီည စခန်းချမယ့် နော်ဗစ်မြို့ကိုရောက်ပါပြီ။ ဒီဒေသမှာ အတော်စည်ကားတဲ့ ဆိပ်ကမ်းမြို့ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ အချိန်က ည ၈ နာရီလောက်ရှိပြီဆုိုတော့ ဗိုက်က တကွိကွိ အော်နေပြီ။ ဘယ်နား စခန်းချရမှန်း မသိသေး။ ဂုိုဂယ်ခေါက်ပြီး ဟီတာ ရှာတော့ မြို့နဲ့ မီနစ် ၂၀ ကျော်မောင်းရတဲ့နေရာမှာ စခန်းတခုတွေ့ပါတယ်။ အင်း- အဲဒီအထိမောင်းပြီမှ ထမင်းချက်မယ်ဆုိုရင်တော့ ငါတုို့ ဒီညမလွယ်ဘူး။ ဒီမြို့မှာပဲ အာရှဆုိုင်တခုခု ရှာပြီး အရင်ဗုိုက်ဖြည့်မှဖြစ်မယ်ပေါ့။ လမ်းတလျောက်မြို့တော်အတော်များများမှာ တရုတ်ဆုိုင်၊ ထုိုင်းဆုိုင်တွေ တွေ့မိပေမယ့် မြန်မာထမင်းဆုိုင်တော့ မတွေ့မိသေးပါဘူး။ မြန်မာနုိုင်ငံဆီ နော်ဝေတွေ သိပ်မရောက်ဖူးသေးလုို့ မြန်မာ အစားအစာဆုိုင်တွေ နော်ဝေမှာ မပေါက်သေးတာလား၊ မြန်မာအစားအစာကုိုယ်တုိုင်က အဆီတွေများလွန်းလုို့ အနောက်တုိုင်းအကြိုက် မဖြစ်သေးတာလား...။ အင်း... နောက်မှ ဆက်ဆွေးနွေးရအောင်၊ ... လောလောဆယ်တော့ တရုတ်ဆုိုင်ကုိုသာမောင်းပေတော့ ဆရာရေ။
တရုတ်ဆုိုင်ဆုိုလုို့- အခုနောက်ပုိုင်း ဂျက်မတုို့လုို ကမ္ဘာကျော် တရုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေပေါ်နေချိန်မှာတောင် နော်ဝေရှိ တရုတ်ဆုိုင်တွေက ပေသီးတွက်နည်းနဲ့သွားနေတုန်း။ ဟုတ်တယ်လေ- ဘယ်ဆိုင်ဝင်ဝင် အင်တာနက် ဖရီးဖွင့်ပေးထားတဲ့ခေတ်မှာ ဒီဆုိုင်က အင် တာနက်မရှိဘူး။ ဖွင့်ပေးထားရင် ဘယ်လောက်ထပ်ကုန်မှာမုို့လဲ။ ၀င်စားတဲ့ခရီးသည်တွေလည်း စိတ်ချမ်းသာပြီး နောက်တခါ ထပ်လာ မှာပေါ့။ အခုတော့ ဒီဆုိုင်တော့ပြီ- နောက်တခါမလာတော့ဘူး- စိတ်ထဲ ဒီလုိုဖြစ်သွားပါတယ်။ ဂျက်မနဲ့တွေ့မှ တရုတ်တွေ ပေသီးတွက် ခေတ်ကနေ ကွန်ပြူတာခေတ်စဉ်းစားပုံဆီပြောင်းပေးပါဆုိုပြီး ပြောရအူးမယ်။
ထမင်းစားပြီးထွက်လာတော့ အဲဒီဆုိုင်ရှေ့နားမှာတင်ရှိတဲ့ ဒီမြို့မှာ အကြီဆုံးဟုိုတယ်ဖြစ်ပုံရတဲ့ ၁၂ ထပ်ရှိ Scandic ဟုိုတယ်ရှေ့မှာ အမှတ်တရ ဓာတ်ပုံရုိုက်။ ပြီးတော့- ခရီးသည်များပြီး ဟုိုတယ်ခန်းတွေ အလွတ်မရှိတော့လို့ မတည်းလုိုက်ရသောဟုိုတယ်- ဆုိုပြီး FB တင်။ မရယ်နဲ့လေ- သတင်းလုိုက်နေတာမဟုတ်ဘူး။ ဟောလီးဒေးသွားနေတာဆုိုတော့ ဒီလုိုလည်း တခါတလေ စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ် လျောက်လုပ်အူးမှပေါ့...။
အဲလုို ၂၀၀၀ ကျော်တန် ဟုိုတယ်ရှေ့မှာ ဓာတ်ပုံရုိုက်ပြီး တကယ်လာတည်းတဲ့ ဟီတာက ၇၀၀ တန်။ (၇၀၀ လည်း ဒေါ်လာ ၁၀၀ လောက်ရှိပါတယ်) အာရှအစာ စားလာပြီးပြီဆုိုတော့ ထမင်းချက်စရာမလုိုတော့ဘူး။ ဒါပေမယ့် မနက်ဖန်အတွက် ရက်ဒီဖြစ်နေအောင် မီးဖုိုရတုန်း ချက်ထား မယ်တဲ့- ကုိုမင်းမင်းကပြောပါတယ်။ ကုိုယ်ကတော့ ရေချိုးခန်းရတုန်း နံနေတဲ့ အတွင်းခံဘောင်းဘီနဲ့ တီရှပ် တချို့ကုို အမြန်လျှော်မှ ဆုိုပြီး ရေချိုးခန်းထဲဝင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ရေချုိုးခန်း နံရံတွေနဲ့ ကုတင်ခြေရင်းမှာ တုိုးလုိုးတွဲလောင်းလှန်းပေါ့။ တကယ်က ဒီလုို လုပ်ခွင့်မရှိဘူးဆုိုပါတယ်။ နော်ဝေလုိုဆုို အီကယ်-လော (Ikke Lov) ပေါ့။ လျှော်ချင်ရင် မနေ့ကတွေ့ခဲ့တဲ့ အ၀တ်လျှော်စက်တွေထဲ ထည့်လျှော်ခဲ့ရမှာတဲ့၊ အဲမှာ အခြောက်လှန်းစက်ပါ ပါတယ်ဆုိုပါတယ်။ ကုိုယ်ကတော့ မြန်မာဆန်ဆန်လေး- ဖြစ်သလုိုတွေးပေါ့...။
(ဟီတာ အကြောင်းနည်းနည်းပြောရဦးမယ်။ Hytter ကုို မြန်မာလုို တဲ လုို့အလွယ် ဘာသာပြန်ပေမယ့် တကယ်က မြန်မာပြည်က တဲလုိုမျိုးတော့ မဟုတ်ပါ။ ဟုိုတယ်၊ မုိုတယ်တွေလုို ၀န်ဆောင်မှုမပါ၊ စားသောက်စရာမပါတဲ့ သာမန်တည်းခုိုဆောင်လုို့ ပြောသင့်ပါတယ်။ ဘန်ဂလုိုပုံစံ မြေစုိုက်ဆောက်ထားတဲ့ တဲတလုံးစီမှာ ကုတင်၊ မီးဖုိုချောင်၊ အိမ်သာ၊ ရေချိုးခန်းပါ ပါတယ်။ တချို့အဆောင်တွေက အိပ်စရာ ကုတင်ပဲပါပြီး ရေချိုးခန်း- အိမ်သာကုို အများသုံးနေရာမှာ သွားသုံးရပါတယ်။ ဒီ ဟီတာတွေက ဟုိုတယ်၊ မုိုတယ်တွေလုို အမြဲတန်းဖွင့်ထားတာမဟုတ်ပဲ အခုလုို ဟောလီးဒေးရာသီမှာ ခုနက Camping Car နဲ့လာသူတွေ၊ ကုိုယ်ပုိုင်ကားနဲ့လာပြီး လမ်းကြုံလုို့ ၀င်တည်းသူတွေအတွက် အဓိကထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။)
အခု ကျနော်တုို့ရတဲ့အခန်းက ၄ ယောက်အိပ်အခန်း။ နေရာက သိပ်မကောင်းဘူး (မနေ့ကလုို ကန်စပ်တွေ၊ ချောင်းစပ်တွေလုို ရှုခင်းမကောင်းဘူး)။ သစ်ပင်တွေကြားက ကွင်းပြင်တခုမှာ။ ၁၅ ပေလောက်ကျယ်တဲ့အခန်းထဲမှာ ၂ ထပ်ပါတဲ့ ကုတင်နှစ်လုံးရှိပါတယ်။ ပြီးတော့ တီဗွီ၊ ဆက်တီတစုံ၊ ထမင်းစား စားပွဲတစုံ၊ လျှပ်စစ်မီးဖုိုနဲ့ အံဆွဲထဲမှာ အုိုး-ခွက်-ပန်းကန် အစုံပါ ပါတယ်။ ဒီနောက်ဖက်မှာတော့ ရေချိုးခန်းနဲ့ အိမ်သာပါတဲ့အခန်းကလည်း ၈ ပေလောက်ရှိပါတယ်။ ကုတင်ပေါ်မှာ စောင်နဲ့ ခေါင်းအုံးလည်းထားပေးထားပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အစွပ်တွေမပါဘူး။ ဒီမှာတည်းတဲ့လူတွေမှာ အစွပ်တွေပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် ဒီကဟာတွေကုိုမသုံးပဲ ကုိုယ်မှာပါလာတာတွေပဲသုံးတယ်။ ဒီကပစည်းတွေကို လက်ယာမပျက် ဒီတုိုင်းပြန်ထားပေးရတယ်ဆုိုပါတယ်။ ကုိုယ်တွေမှာက အိပ်ယာလိပ်တခုပဲပါတာ။ ဒီတော့ ခေါင်းအုံးပေါ် မျက်နှာသုတ်ပုဝါတင်ပြီး အိပ်ပေါ့။ နောက်နေ့မနက် အခန်းပြန်အပ်ချိန်မှာ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရမယ်။ ကိုယ် အခန်းထဲ စ၀င်တဲ့အချိန်က ရှိတဲ့အတုိုင်း ပြန်လုပ်ပေးခဲ့ရမယ်တဲ့...။
ဒါပေမယ့် ဘယ်သူကမှ လာစစ်တာမဟုတ်ဘူး။ ကောင်တာမှာထုိုင်တဲ့လူက ညနေက တချက်ပဲလာပြီး ပြန်သွားပြီ။ ဒီမှာ အားလုံး ဧည့် သည်တွေချည်းပဲ။ ကိုယ့်ပြန်ထွက်တဲ့အချိန်မှာ အခန်းသော့ကုို ကောင်တာက စာတုိုက်ပုံးထဲ ထည့်ထားခဲ့ရမှာ။ ဒီတော့ အခန်းမရှင်းပဲ ထွက်သွားရင် ဘယ်သူကသိမှာလဲ။ အိုး-ခွက်-ပန်းကန်တွေ မဆေးပဲထားခဲ့ရင် ဘယ်သူက သိမှာလည်း။ ကုိုယ်လည်း နောက်တခေါက် ဘယ်တော့ရောက်မယ်မှန်းမသိ။ သူ့လည်း ကိုယ်ကုိုမှတ်မိတာမဟုတ်။ ငွေချေတာလည်း ခရက်ဒစ်နဲ့မဟုတ်ပဲ ငွေသားပေးထားတာပဲဟာ -သူဘယ်လုိုက်ရှာမလဲပေါ့...။
တခါစားမလုပ်နဲ့ အူးလေး။ နုိုင်ငံကြီးသား ပီသပါ။ ဒီလုို အခကြေးငွေနဲ့ငှားတဲ့ ဟီတာကို မပြောနဲ့။ လူသူအရောက်နည်းတဲ့ တောတောင် တွေထဲက ဟီတာတွေမှာလည်း ဒီလုိုပဲ ပစည်းတွေထားပေးထားတယ်။ စနစ်တကျသာ လုပ်သွားပါ။ သင်က မလုပ်ဘူးဆုိုရင် နောက်လူတွေ ဒုက္ခရောက်မယ်။ ကုိုယ့်ကြောင့် တခြားသူ ဒုက္ခမရောက်ပါစေနဲ့ပေါ့...။ ကုိုယ့်တာဝန်ကုိုယ်ယူတဲ့ စနစ်လေးက ဒီမှာ မူကြိုကတည်းက ပါလာကြတယ်ဆုိုပါတယ်။ ကုိုယ်တွေဆီမှာတော့ ဒီလုို အပျော်သွားတည်းတဲ့နေရာ ထားလုိုက်တော့။ ဒုက္ခရောက်လုို့ အလားကား ပေးတည်းတဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းက ကွာရင်တင်းစခန်းတွေမှာတောင် ဖြစ်သလုိုလုပ်ထားခဲ့တဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကုို မကြာခဏ မြင်နေရဆဲ မဟုတ်ပါလား...။
Fjord ရေလက်ကြားက နော်ဝေမှာပဲ ရှိတာလား...
မြန်မာပြည်အကြောင်း ယှဉ်ယှဉ်ပြီး စဉ်းစားရင်းနဲ့ ခရီးက ရှေ့ကိုသိပ်မရောက်ဘူးဖြစ်နေပြီ။ မင်းမြောက်ပုိုင်းအငူကလည်း အခုထိ မရောက်နုိုင်သေးဘူးလားဆုိုပြီး ပရိသတ်က ထအော်တော့မယ်။ ခဏတော့ သီးခံပါ အူးလေး...။ (၉ ရက်တောင် ကားမောင်းပြီးသွားထားရတယ်ဆုိုတော့ ၃ ရက်တပုဒ်နှုန်းနဲ့ ၃ ပိုင်းတော့ သီးခံပြီးဖတ်ပေါ့...)။ ဒီနေ့ Narvik-နားဗစ် နဲ့ Alta -အာလ်တာ- ကြားခရီးစဉ်ကုိုတော့ ခပ်ကျဉ်းကျဉ်းရေးမှဖြစ်တော့မယ်။ ဒီနေ့ ၄ ရက်မြောက်ခရီးစဉ်က နောက်ထပ် ကီလုို ၆၂၀ ကျော်ထပ်မောင်းရမယ့် Alta -အာလ်တာမြို့ဆီ။ အဲဒီရောက်ပြီးမှ မြောက်ပိုင်းအငူကုို တခါတည်းတက်မလား၊ ရုရှားနယ်စပ်ဖက်သွားမလား... ရာသီဥတုအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး ဆုံးဖြတ်ရမှာ...။
ဒီနေ့ကမဆုိုးဘူး။ မုိုးနည်းနည်းပါးသွားပြီး နေရောင်ပြပြလေး မြင်လာနေရပြီ။ အခြေအနေက ကုိုယ်ဖက်ပါလာနေပြီပေါ့။ ဒီဖက်မှာ သမင်လေးတွေကို စတွေ့ရတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ နော်ဝေနုိုင်ငံက အဝေးပြေးလမ်းအတော်များများမှာ -သမင်တွေ လမ်းဖြတ်ကူးတဲ့နေရာရှိသည်- သတိထားမောင်းပါ- ဆုိုတဲ့ သမင်ပုံပါတဲ့ ဆုိုင်းဘုတ်တွေ တွေ့ရလေ့ရှိပါတယ်။ ဒီဖက်မှာတော့ ဆုိုင်းဘုတ်အပြင် သမင်အရှင်လတ်လတ်တွေ လမ်းကူးနေတာကုိုပါ တွေ့လာရပါတယ်။ မြောက်ဖက်ကျလေ ပုိုတွေ့ရလေလုို့ ဆုိုပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆုို တော- တောင်တွေက သစ်ပင်နည်းပြီး မြက်ခင်းတွေချည်းများနေလုို့လုို့ ထင်ရတာပါပဲ။
တကောင်လောက် ကားနဲ့ဝင်တုိုက်ပြီး သမင်သား မျည်းကြည့်မလား.ဆုိုတော့.. သွားမလုပ်နဲ့အူးလေး... အဲဒါ ပြစ်မှုအတော်ကြီးတယ်တဲ့...။ ရေကန်ဘေးမှာတွေ့နေရတဲ့ ဘဲလေးတွေကိုတောင်မှ ဘာမှလုပ်လုို့မရတာ- ဒီလုိုဘေးမဲ့ပေးထားတဲ့ အကောင်ကြီးဆုိုရင်တော့ အင်း- ထောင်ဘယ်လောက်ချခံရမလဲ မသိဘူး။ နော်ဝေရောက်ရင် နော်ဝေလုိုတွေးလေ... မြန်မာလုိုချည်းပဲတွေး-တွေးနေတော့ သမင်တွေ လည်း ကုိုယ်တွေကုိုကြောက်လုို့ ထွက်ပြေးကုန်ပြီနဲ့တူပါတယ်။
မြန်မာလုိုမတွေးနဲ့ဆုိုပါမှ မြန်မာနဲ့နုိုင်းယှဉ်ပြောစရာတွေကလည်း တခုပြီးတခုပေါ် ပေါ်လာနေပြန်ပါတယ်။ ခုနက ထရိုးဟိန်းမြို့အလွန် မြောက်ပုိုင်းခရီးစဉ်စတင်ကတည်းက လမ်းအသစ်တွေပြင်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။ ကျနော်တုို့ ရေး-ထားဝယ် ကားလမ်းက မလွဲတောင်ကုို ဖြိုပြီး လမ်းအကွေ့အကောက်တွေကို အဖြောင့်ပြန်လုပ်ထားတဲ့ ပုံစံမျုိုးပေါ့။ ဒါပေမယ့် ဒီမှာက နည်းပညာမြင့်လုို့လား မသိဘူး။ တောင်ကုို မဖြိုပဲ ဂူဖောက်လုိုက်တာ အတော်များပါတယ်။ အခု ဒီနေ့သွားမယ့်ခရီးစဉ်မှာဆုိုရင် ဒီလမ်းတလျောက် ဂူတွေအများဆုံး ဒေသလုို့ဆုိုပါတယ်။
မြန်မာပြည်မှာတော့ ကျောက်တွေက နော်ဝေလုို သက်တန်းမရင့်သေးတဲ့အတွက် ဂူဖောက်ရခက်တယ်။ ပြိုကျ နုိုင်ခြေများတယ်လုို့ ကြားဖူးပါတယ်။ (နေပြည်တော်-မြိုင် ၀န်းကျင်းရှိ စစ်သုံးလိုင်ဂူတွေက လွဲရင်ပေါ့)။ ဒီက လှိုင်ဂူတွေက အချို့နေရမှာဆုို ၈ ကီလုိုလောက်အထိရှည်တယ်။ ဂူ ထဲရောက်နေတုန်း မီးပျက်သွားရင် ဘယ်လုိုလုပ်မတုန်းတဲ့...။ ကုိုမင်း မင်းက ကားမောင်းရင်းနဲ့ နောက်ပါတယ်။ နွေရာသီဆုိုတော့ တချို့ဂူတွေက ပြန်ပြင်နေတာတွေရှိတယ်။ ဂူတခုဆုိုရင် လမ်းအတော်ဆုိုးပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာဆုို လျှပ်စစ်မီးက ခဏခဏပျက်နေတော့ ဒီလုိုဂူတွေနဲ့ဖြစ်ပါ့မလားပေါ့...။
နော်ဝေဟာ ဂူတွေများတဲ့အပြင် ကမ္ဘာ့အရှည်ဆုံလှုိုင်ဂူဆုိုပြီး ၂၄.၅၁ ကီလုိုကျော်နဲ့ စံချိန်ချိုးထားတဲ့ Lærdal Tunnel ဆိုတဲ့ လှိုင်ဂူတခု တောင်ပုိုင်းက ဒုတိယမြို့တော် ဘာဂင်ဆီသွားတဲ့လမ်းပေါ်က Aurland ဒေသမှာရှိပါတယ်။
သီချင်းတွေဖက် လှည့်ရအောင်။ ကားမောင်းလာတာ ၄ ရက်ရှိပြီဆုိုတော့ သီချင်းတွေကလည်း ထပ်နေပြီ။ စုိုင်းထီးဆုိုင်၊ ခုိုင်ထူး၊ ခင်မောင်တုိုး၊ ထူးအိမ်သင်၊ ဇော်ဝင်းထွတ်၊ လေးဖြူ၊ အာဇာနည်၊ ၀ုိုင်းဝိုင်း၊ မျိုးကြီး၊ ဇော်ပိုင်၊ ဝေလ၊ စုိုင်းစုိုင်း- အတော်စုံနေပြီ။ တနေ့ ၈ နာရီလောက် ကားပေါ်ထိုင်နေတယ်ဆုိုတော့ တနာရီတယောက်နှုန်းနဲ့တောင် အဆုိုတော်က တရက် ၈ ယောက်ရှိနေပြီ။ အထူးသဖြင့် ကားမောင်းနေစဉ် အိပ်မငုိုက်အောင် သီးချင်းနားထောင်ပါတယ်ဆုိုမှ တချုို့သီချင်းတွေက ခံစားချက်ကုို ဆွဲခေါ်သွားပြီး ငုိုက်သလုိုလုို ဖြစ်သွားလေရဲ့။ နောက်ဆုံးတော့ ကုိုမင်းမင်း ဘယ်ကရှာလာလဲ မသိဘူး။ (အားလုံးက စီဒီတွေ၊ ယူအက်စ်ဘီတွေနဲ့ဖွင့်တာမဟုတ်ဘူး။ အွန်လုိုင်း ကနေ တုိုက်ရုိုက်ရှာဖွင့်တာ) နေ၀င်းရဲ့ -ဆွေမျိုးပါမေ့- ဆုိုတဲ့ ဟစ်ဟွတ်နဲ့တွေ့မှ နည်းနည်း အိပ်ငိုက်ပြေသွားပါတယ်။
အိပ်ငုိုက်ပြေချိန်မှ ဖုန်းက ၀င်လာပါတယ်။ ကိုဇော်ဝင်းလွင်ဆီက (သူပုန်ကျောင်းသား စာအုပ်ထဲက ABSDF ဗဟုိုကော်မီတီဝင်ဟောင်း၊ အခု ရောင်ချည်ဦး အလုပ်သမားရေး ဆောင်ရွက်နေသူ) သူတုို့လည်း မြောက်ပုိုင်းကုိုသွားနေတယ်။ အခု Lofoten ကျွန်းတွေဆီ ရောက်ခါနီးပြီတဲ့။ ဟ- ဘယ်နားလဲ လုိုဖုိုတယ်၊ ခင်ဗျားတုို့က Nordkapp မလာဘူးလားဆုိုတာ့... ဝေးလွန်းလုို့တဲ့။ မိသားစုလည်းပါလုို့၊ ကားမောင်းတဲ့သူကလည်း တယောက်တည်းဆုိုတော့ ကျနော်တုို့လုို တရက် ကီလုို ၆၀၀ မမောင်းပဲ ၃၀၀ လောက်ပဲ မောင်းနုိုင်တယ်တဲ့...။
အင်း- တကယ်က သူတုို့မိသားစု မြောက်ပုိုင်းသွားနေမှန်း ကြိုမသိဘူး။ FB တင်ထားတဲ့ပုံတွေအရ ကျနော်တုို့ အာတိတ်စက်ဝုိုင်းက ထွက်လာပြီး မကြာခင်မှာ သူတို့က အဲဒီမှာ ရုိုက်ထားတဲ့ပုံတွေ တင်ထားတာတွေ့လုိုက်လို့ မက်ဆင်ဂျာကနေ လှမ်းမေးထားလုို့ သူက ဖုန်း ပြန်ခေါ်လာတာ။ သိတယ်မုို့လား ခေတ်ကုိုက။ ဘယ်သူ ဘာလုပ်နေလဲ ဆုိုတာ စစ်မေးရင်ဖြေချင်မှဖြေမယ်။ ဒါပေမယ့် FB မှာ ပုံမတင်ရ ရင် မနေနုိုင်တဲ့ခေတ်ဆုိုတော့ စစ်မေးစရာမလုိုဘူး။ နော်ဝေက အခြားမြန်မာအတော်များများလည်း အော်လီစွန်း၊ ဘာဂင်နဲ့ တောင်ပုိုင်းက သိပ်လှတဲ့တောင်တန်းတွေ၊ ရေလက်ကြားတွေဆီ သွားလယ်နေကြတဲ့ပုံတွေ FB ပေါ်မှာ အများကြီး။
သူတုို့လည်း နော်ဝေတွေလုိုပဲ။ ပြည်ပ ထွက်မရလုို့ ပြည်တွင်းမှာ ဟောလီးဒေးသွားနေသူတွေ။ အရင်နှစ်တွေကဆုိုရင်တော့ ဒီရာသီမှာ မြန်မာနုိုင်ငံက အမျိုးတွေဆီ ပြန်ရောက်နေချိန်ပေါ့။ မြန်မာပြည်အကြောင်း မတွေးဘူးဆုိုပါမှ မြန်မာအကြောင်းက ပြန်ပြန်ပေါ်လာနေတယ်။ ဒီလုိုပြောရင်းနဲ့ ကားက အတော်ခရီးပေါက်လာပြီ။ လမ်းတလျောက်မြင်ရတဲ့အကြောင်းတော့ သိပ်မပြောတော့ပါဘူး။ Alta -အာလ်တာမြို့ကုို ၀င်ခုိုင်းလုိုက်ပါတော့မယ်။
ကံကောင်းထောက်မစွာနဲ့ ဒီမြို့မှာလည်း ဟီတာ အခန်းရပါတယ်။ နေရာက ပင်လယ်ကမ်းစပ်လေးမှာ။ ရောက်တဲ့အချိန်က ၇ နာရီဆုိုတော့ နေသာနေတုန်း။ မြောက်ပုိုင်းအတော်ရောက်လာပြီဆုိုတော့ ဒီည နေမ၀င်လောက်တော့ဘူးထင်ပါတယ်။ အချိန်ရတုန်း ထမင်းချက် မလားဆုိုတော့... မဟုတ်ဘူး။ ဒီနေ့ငှားမျှားမယ်တဲ့- ဆရာသမားနှစ်ဦးကဆုိုပါတယ်။ ကောင်တာမှာမေးကြည့်တော့ ဒီနားမျှားလုို့မရဘူး။ ဟုိုး..မှာမြင်နေရတဲ့ အငူဖက်ကားမောင်းသွားပြီး အဲဒီမှာ မျှားပါတဲ့။ အင်း- ဒီဆရာသမားနှစ်ဦးကလည်း ငါးမျှားဝါသနာပါတာ အုံးမလီက ကရင်တုိုင်းရင်းသားတွေအတုိုင်းပဲ။ ကွာတာက ဟုိုလူတွေက ငါးမျှားတုိုင်း မိပြီး အိမ်က ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ ငါးတွေအပြည့်။ ဒီ နှစ်ယောက်က ငါးမျှားတန်တကားကားနဲ့ အသေချာမျှားနေပေမယ့် အခုထိ တကောင်မှ မမိသေး။
ဟုိုမှာ ငါးကင်ဖုို့ မီးဖုိုကအသင့်၊ ဘီယာကလည်း အသင့်။ ဒါပေမယ့် ငါးက မမိဘူးဆုိုတော့ ကားနောက်ခန်းထဲက ဘလောင်ချောင်ဘူးတွေကိုပဲ ယူပြီး မြည်းခဲ့ရပေါ့။ -ငါးမမိလည်း ရေချိုးပြန်ပေါ့- ဆုိုပြီး မြန်မာစကားပုံရှိပေမယ့် ဒီမှာတော့ အဲတုိုင်း သွားလုပ်လုို့မဖြစ်။ ရေက အတော်အေးတာ၊ လေကလည်း တုိုက်နေသေး။ ဒီတော့ ဟီတာဘေးက ဆောင်နာကုို (Sauna- ချွေးထုတ်ခန်း) ၀င်မှဖြစ်မယ်။ ဒီက ဟီတာက မနေ့ကလုို မီးဖုိုးချောင်နဲ့ ရေချိုးခန်းတွဲပြီးမပါဘူး။ ကောင်တာဘေးရှိ မီးဖုိုချောင်ဘေးမှာ ရေချုိုးခန်းရှိပြီး အမျိုးသား- အမျိုးသမီး ရေချိုးခန်းကြားမှာ ဆောင်နာရှိပါတယ်။
သူတုို့ နှစ်ယောက်က ဆောင်နာထဲ ပူလွန်းလုို့ မ၀င်ချင်ဘူးတဲ့။ ကုိုယ်ကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်လောက်က ဖင်လန်နုိုင်ငံဆီ သွားလည်ပြီး ကတည်းက ဆောင်နာကုိုကြိုက်နေတာ။ ဖင်လန်က အိမ်တုိုင်းလုိုလုိုမှာ ဆောင်နာရှိပေမယ့် နော်ဝေမှာက မရှိဘူး။ ဒီလုို ဟီတာတွေ၊ ရေကူးကန်တွေ၊ ဟုိုတယ်တွေမှာပဲရှိတာ။ (နော်ဝေ-ဒိန်းမတ်-ဂျာမဏီသွားတဲ့ သဘောင်္တွေပေါ်မှာလည်း ရှိပါတယ်)။ အလကားရတုန်း ၀င်ထားအူးမှ ဆုိုပြီး ၀င်လုိုက်တာ...။ အန်- အထဲမှာ စုံတွဲတတွဲက အ၀တ်ဗလာ သူ့ချည်းသာ...။
ဆောင်နာဝင်ပါတယ်ဆုိုမှ ဘယ်သူက အ၀တ်ပါမှာလဲ...။ အားလုံး ကုိုယ်တုံးလုံးဝင်ရတာမျိုး။ ဒါပေမယ့် သိတယ်မုို့လား... အာရှက လာတဲ့လူတွေဆုိုတော့ အတွင်းခံလေးတော့ ၀တ်ထားအူးမှပေါ့...။ အဲဒီ အသက်ကြီးစုံတွဲက အေးဆေးပဲ၊ လွတ်တဲ့နေရာမှာ ၀င်ထုိုင်ပါပေါ့။ ကုိုယ်က ရှက်ပြီး ကြောင်အန်းအန်း၊ ရပါတယ်- ခင်ဗျားတုို့ ပြီးမှ ၀င်မယ်- ရေအရင်ချိုးလုိုက်အူးမယ်ပေါ့။ (ဆောင်နာက ရေချိုး- ကိုယ်လက် သန့်စင်ပြီးမှ ၀င်ရတာ)
ခဏနေတော့ အဲဒီထဲက အမျိုးသားက ပြန်ထွက်လာပါတယ်။ ကျနော် ၀င်လုို့ရပြီးလား ဆုိုတော့- ရပြီ- ဒါပေမယ့် ငါ့ အမျိုးသမီးတော့ ကျန်နေသေးတယ်-တဲ့။ - ဟာ မလုပ်ပါနဲ့ အူးလေးရယ်-လုို့ပြောပြီး သူ့အမျိုးသမီးမထွက်ခင်အထိ ရေချိုးခန်းဘေးမှာရပ်ပြီး စကားမရှိ စကားရှာပြောနေရပါတယ်။ တကယ်က သူတုို့ဟာ နော်ဝေတွေ မဟုတ်ဘူး။ ဆွင်ဇလန်ကနေ Nordkapp အထိ တကူးတကာ့ လာလည်တာတဲ့။ အိမ်ထောင်သက် ၅ နှစ်ပြည့် ဟန်းနီးမွန်းလုို့ ဆုိုပါတယ်။
လေယာဉ်တွေမပြေးသေးလုို့ ဟုိုး…ဆွင်ဇလန်ကနေ Camping car တစီးနဲ့ ဂျာမဏီကုိုဖြတ်၊ ဒိန်းမတ်ကုိုဖြတ်ပြီး (ရှေ့မှာ တင်ပြခဲ့ဖူးသလုို ဆွီဒင်က ပိတ်ထားဆဲဆုိုတော့ ဒိန်းမတ်ကနေ နော်ဝေတောင်ပုိုင်းဆိပ်ကမ်းကုို ဇက်နဲ့ဖြတ်ကူး) စခရစ်စတာဆန်း ဆိပ်ကမ်းကနေ ဒီကုိုမောင်းလာတာတဲ့။ WoW. ကုိုယ်တွေက အော်စလုိုနဲ့ Nordkapp အတော်ဝေးနေပြီဆုိုပြီး ညီးနေတာ။ သူတုို့က ဟုိုး…ဆွိဇလန်ကနေတောင် ဒီအထိ ကားမောင်းပြီးလာတယ်တဲ့...။
ထွက်လာတာ ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ၊ ဆွင်ဇလန်မှာလည်း လှပတဲ့ တောတောင်တွေရှိတာပဲ မုို့လားဆိုပြီး (စာရေးသူက လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်ခန့်က ဂျီနီဗာကုို တခေါက် ရောက်ဖူးပါတယ်) အတွန့်တက်မိပါတယ်။ ၁၀ ရက်လောက်ရှိနေပြီ၊ ခွင့်က ၆ ပတ် (၄၅ ရက်) ယူထားတာတဲ့၊ သေပြီ ဆရာ။ ကုိုယ်တွေက ၁၀ ရက်ကုို အတော်များနေပြီထင်တာ။
ပြီးတော့ သူကပြောပါတယ်။ -တောတောင် သဘာဝ အလှတွေ၊ ရေခဲလျှောစီးတဲ့ တောင်တန်းတွေ ဆွင်ဇလန်မှာနာမည်ကြီးပေမယ့် ပင်လယ်မရှိဘူး။ ကမ်းခြေမရှိဘူး။ အထူးသဖြင့် နော်ဝေမှာနာမည်ကြီးတဲ့ ရေလက်ကြား Fjord တွေ မရှိဘူးတဲ့...။ ကုိုယ်လည်း သူပြောမှပဲ အသေချာ စဉ်းစားမိပါတယ်။ Fjord ဆုိုတဲ့စကားလုံးက နော်ဝေမှာပဲရှိတယ်။ ရေလက်ကြားလုို့ အလွယ်ဘာသာပြန်ပေမယ့် မြန်မာနုိုင်ငံက ရေလက်ကြားတွေလုိုမဟုတ်ဘူး။ ကျောက်တောင်ပေါ်ကနေ သဘာဝအတုိုင်း စိမ့်ထွက်လာတဲ့ရေတွေက ချောင်းငယ်သဘောမျိုး စီးဆင်းရာကနေ ကျောက်တောင်တွေကြားမှာ ရှိနေတဲ့၊ စိတ်ကူးယဉ်ဆန်လှတဲ့ တောင်ပေါ်မြစ်-လုို့ ခေါ်ရမယ်ထင်ပါတယ်။
ကျောက်စိမ့်ရေဆုိုပေမယ့် တကယ်ကတော့ ကျောက်တောင်တွေပေါ်က ရေခဲတွေအရည်ပျော်ပြီးဆင်းလာတဲ့ ရေတွေဖြစ်ဖုို့များပါတယ်။ ဒီတော့ ချောင်းက စမ်းချောင်းသဘောမျိုးမဟုတ်ပဲ ပင်လယ်ကူးသဘောင်္တွေသွားနုိုင်တဲ့အထိ ကြီးမား-ကျယ်ပြန့်တဲ့ ကျောက်တောင်တွေကြားက လှို့ဝှက်မြစ်များလုို့ ခေါ်သင့်တယ်ထင်ပါတယ်။
ဒီလုိုထူးခြားတဲ့ သဘာဝအလှတွေရှိတာကြောင့် ဥရောပတလွှားကလူတွေ (အခုချိန်မှာ ဥရောပပြင်ကုိုလည် သွားခွင့်မရှိ၊ ဥရောပထဲမှာတောင် ဖွင့်လုိုက်-ပိတ်လုိုက်ဖြစ်နေ) နော်ဝေမြောက်ပုိုင်းကို လာလယ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။. ။
(ရုရှား-ဖင်လန် နယ်စပ်နဲ့ နေမ၀င်ညများရှိတဲ့ Nordkapp အကြောင်းကုိုတော့ ရှေ့တပတ် စောင့်မျှော်တော်မူပါရန်)။
ကမ္ဘာ့မြောက်ဖျားအငူ North Cape သုို့ ခရီးသွားခြင်း (၃)
ကမ္ဘာ့မြောက်ဖျားအငူ North Cape သုို့ ခရီးသွားခြင်း (၁)
နော်ဝေ တောင်ဖက်စွန်း Lindesnes သုို့ ခရီးဆက်ခြင်း...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပန်းခြံသုို့ လေ့လာရေးခရီး